Homeမြေပုံမြို့မှ GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ
မြေပုံမြို့မှ GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ
November 21, 2013 July 27, 2014 komyebon MyebonNews, Other
မြေပုံမြို့မှ တန်းဖိုးနည်း GSM ဆင်းကတ် ပြသနာများ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံ မြို့ ရွာသစ်ကေ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူး သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း အများပြည်သူအတွက် GSM ( 1500 ) ကျပ်တန် ဆင်းကတ်များကို မဲစနစ် ဖြင့်ခွဲဝေဆောင် ရွက်ရာတွင်
အုပ်ချုပ်ရေးမူး၏ မိသားစု ၀င်များ ၊ ဆွေမျိုးများသာ ဖုန်းကတ်မဲပေါက်နေပီး ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှာ သံသယ တချို့ဖြင့် ဖုန်းကတ် မပါသော ဗလာမဲများသာ ရရှိခဲ့ပါသည် …
စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စေ ရန် ရလာဒ်များကို တင်ပြလိုက်ပါသည်
မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမူး ၏ ဆွေမျိုး ၊ မိသားစုထဲမှဖုန်းကတ် မဲပေါက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
SIM ကတ် ၁၅ ကတ်မှ ၅ ကတ်အား အုပ်ချုပ်ရေးမူး အဖွဲ့ ၀င်များအတွက် ၃ ကတ် ၊ဆယ်အိမ်မူး များအတွက် ၁ ကတ် နှင့် မိခင်နှင့်ခလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းအတွက် တစ်ကတ် ကို အစည်းအဝေး သဘောတူညီ ချက်အရ ဖယ်ချန်ထားခဲ့ပါသည်..
No . 250 454 830
No . 250 454 828
No . 250 454 824
တို့ မှာ ကား SIM ကတ်မဲပေါက်သူများထံမှ ၉၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ပေးကာ ၀ယ်ယူထားသော ဖုန်းနံပါတ်များ ဖြစ်ပါသည်…..
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့် က အုပ်ချုပ်ရေးမူး ထံမှ ဖြေရှင်းချက် ထွက်လာသော်လည်း အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ထက် ၂၅၀၀ ကျပ်ထက် ပိုနေသော ငွေပေးဆောင် ရမူများရှိနေပါသည် ။
ထိုကြောင့် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၃ ပုံတစ်ပုံ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမူး မိသားစု သုံးပုံတစ်ပုံ နှင့် ရပ်ကွက် အတွင်းမှ ပြည်သူများ ၃ ပုံတစ်ပုံ ကံထူးကြသည်ဟု ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ သံသယဖြစ်လောက်အောင် ဆန်းပြားလွန်းသည့် ဖုန်းကတ်အကြောင်း ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်…။
အလားတူ တရုတ်တန်းရပ်ကွက် တွင် လည်း မကျေနပ်မူ များ ၊ လိမ်လည်မူများ ထွက်ပေါ်နေပီး အထောက်အထားဖြင့် မတင်ပြနိုင် သေးသဖြင့် ကျနော်တို့အဖွဲ့မှ ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါသည် …။
ပိုဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်မှာ GSM တန်ဖိုးနည်းဆင်းကတ်များ ပြည်သူ အတွက်တောင် မှ မလောက်မငှ နိုင်ရှာသော GSM ဆင်းကတ်များကို ဘင်္ဂလီများ က အာဏာပိုင်များဖြင့် ပူးပေါင်း ပီး ဈေးကြီးပေးဝယ်နေသည် ဟု ကျနော် တို့ သိမိ ၊ ကြားမိခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်
ဆင်းကတ်နှင့်ပတ်သတ်သော Post တစ်ခု ကို ဖတ်လိုပါက ကလစ်နှိပ်ပါ
← မြေပုံ မှ GSM SIMCARD သတင်းများ
မြေပုံမြို့ တွင် စာပေဟောပြောပွဲ လုပ်တော့မည် →